Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment शिवमायाले राजीनामा नदिए के हुन्छ ? - Pnpkhabar.com
शिवमायाले राजीनामा नदिए के हुन्छ ?
काठमाडाैं, २७ पुस : डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले उपसभामुखबाट राजीनामा नदिई सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाए सत्तासीन नेकपा संवेैधानिक संकटमा पर्ने देखिन्छ। ‘संसद् सचिवालयले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीलाई म बैठकमा अगाडि बढाउँछु’, तुम्बाहाङफेले भनिन्। सचिवालयले सभामुख निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावित कार्यसूची बनाएको छ।
तर, तुम्बाहाङफेले राजीनामा नदिई सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेकपाले सभामुख पद गुमाउने नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। ‘उहाँले राजीनामा नदिई प्रक्रिया अगाडि बढाए नेकपाले सभामुख पद गुमाउनुपर्छ’, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने। पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसँग शुक्रबार भएको संयुक्त छलफलमा उपसभामुख तुम्बाहाङफेले आफूलाई सभामुख नबनाए संसद् सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।
त्यसक्रममा तुम्बाहाङफेले सभामुख आफूलाई बनाए मात्र राजीनामा दिने, नभए आफूले संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यस्तो अवस्थामा महाभियोग लगाए पनि सामना गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। तुम्बाहाङफेको ‘चेतावनी’ पछि दुवै अध्यक्षले उपसभामुखले राजीनामा नदिई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने/नसक्नेबारे पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई फोन गरेर राय मागेका थिए।
नेम्बाङले उपसभामुखले राजीनामा नदिई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नेकपाले सभामुखमा दाबी गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि दुवै अध्यक्षले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरेका थिए। अन्नपूर्णा पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।